Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Pịa ebe a ma ọ bụrụ na nke a bụ ntọhapụ mgbasa ozi gị! » Tiketi ụgbọ elu efu: Ontario ka Reno-Tahoe
Ndị njem nwere ike ịnụ ụtọ Reno na Ọdọ Tahoe ama ama n'ụwa, ugbu a naanị ụgbọ elu anaghị akwụsị akwụsị. Ụgwọ mmeghe pụrụ iche dị site na Nọvemba 15, mana ọ ka mma, ndị njem 100 mbụ ga-ede akwụkwọ ga-enweta ụgbọ elu efu!
aha! kwadoro site na veteran ExpressJet ụgbọ elu aghọwo akụkụ nke Inland Empire/Ontario, Calif. obodo na ya inaugural nonstop flight to Reno on Nov. 4. The inaugural ụgbọ elu amalite aha! Ọrụ n'etiti Reno-Tahoe International Airport na Ontario International Airport.
aha! Na-enye ndị ahịa 100 Ontario-Reno otu tiketi efu. Ndị njem nwere ike iji koodu mgbasa ozi WELCOME2ONT ịnata ego isi $0 maka njem site na Jan. 15, 2021 (dị maka ịzụrụ ruo n'elekere 11:59 ehihie na Nọvemba 7, 2021, ebe ọ na-eweta na-adịru. Ọ dịghị mma maka njem Nọvemba 24-29. Mgbochi ndị ọzọ metụtara).
Flightsgbọ elu ga-arụ ọrụ Tuzdee, Tọzdee na Sọnde ọ bụla na-apụ na Ontario n'elekere anọ nke mgbede na-erute na Reno-Tahoe na 4:5 pm ụgbọ elu Reno na Ontario ga-apụ na 28:1 ehihie wee rute na 35:3 mgbede.
Ụgbọ elu nke awa 1 na nkeji iri abụọ na asatọ na-enye ndị njem ohere oge n'ala ka ha jiri oge ezumike ha mee ihe na ikike ijikọta njem dị mkpirikpi nke etiti izu iji nweta uru nke ọnụ ala ụlọ oriri na ọṅụṅụ nke ụbọchị izu.